Lioka 23 – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 22, 2012 mars 22, 2012 Laisser un commentaire sur Lioka 23
« Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony » Lioka 23:34
Azo oharina amin’ny inona re ny maha-samihafa ny fihevintsika sy ny fihevitry ny Tompo? Raha ny Soratra Masina no Jerena dia izao no lazainy: Tahaka ny hahavon’ny lanitra noho ny tany no hahavon’ny làlako ny làlanareo. Tsy misy maharefy ny elanelan’ny tany sy ny lanitra, fa ny lanitra aza tsy hita marina ny fihafarany. Ny ambaran’ny Soratra Masina amin’izany dia tena ambony tokoa ny làlan’ny Tompo noho ny làlantsika.
Io no maha-hafa ny fihevitr’i Jesosy: sarobidy aminy ny fahavelomana na dia ny an’ny fahavalony aza, satria raha mbola misy fofonaina dia mbola misy azo antenaina. Ny Fanantenana lehibe indrindra dia ny fahavelomana mandra-kizay ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Ny fandraisantsika ny Famelan-keloka avy amin’i Jesosy no làlana tokana hahazoana miditra amin’ny fanjakan’
Andriamanitra. Inona no antony nahatongavan’i Jesosy teto antany? Ny hamely sabatra an’ireo izay nikasa hamono Azy sa ny hitondra Famonjena ho an’izay rehetra mandray izany Famonjena izany?
Raha miverina eto amin’ny andinin-tSoratra Masina eto isika: « Raiko ô, mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony! » Iza no iresahan’i Jesosy eto? Ny Andriamanitra Ray eto no iresahany: mivavaka Izy eto.
Eto amin’izao fotoan-tsarotra izao dia mivavaka Jesosy. Moa ve rehefa mandalo fotoantsarotra isika dia mba mahatsiaro mivavaka, na miresaka amin’ny Tompo? Sao dia ny fisainana ara-nofo no mandeha alo-ha, tahaka ny an’ny mpianatra eto dia ny handray ny sabatra, dia ny sabatra ara-nofo fa tsy ny sabatry ny Fanahy akory.(jereo Efesiana 6:17)
Ankehitriny, raha namono an’i Jesosy isika, tsy niraharaha Azy isika, ka naleontsika nila hevitra tamin’olombelona, nitodika tany amin’izao tontolo izao isika, niantehitra tamin’ ny fisainan’ny fontsika, dia mivavaka ho antsika Izy ankehitriny, mandohalika ho antsika eo ankavanan’ny Ray, ary hoy Izy: mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Tsy hampiasa sabatra aminao Izy, tsy hikapoka anao akory Izy; koa manatona Azy. Hoy ny Teniny, fa izay rehetra manatona Azy tsy mba holaviny mihitsy.
Publié parfilazantsaramada mars 22, 2012 mars 22, 2012 Publié dansUncategorized